Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Faraca Iftin Iyo Shahaadooyin Lagudoonsiiyay Xubno Badan.
Waxaa shalay ooy taariikhdu ku beegnayd 28/9/2015 waxaa Xerada Qoxootiga Xagardheere ee deegaanka Faafi ka qabsoomay shirkii caadiga ahaa ee faraca Iftin. Shirkan ooy soo qabanqaabiyeen maamulka Faraca Iftin ayaa furmay
abaarihii 9:30 xiliga Bariga Africa waxaana si rasmi ah u furay gudoomiyaha faraca halgame Sheekh Ibraahim oo dadwaynihii faraha badnaa ee shirka fadhiyay u sheegay qodobada ay usoo diyaariyeen ineey kahadlaan ooy kamid ahayd bixinta shahaadooyin lasiinayo ardaydii dhamaysay Koorso halgameedka Alifle ee lagu barto sooyaalka
taariikheed ee halganka Somalida Ogadenia iyo guud ahaan taariikhda Ogadenia.
Intaas kadib gudoonka ayaa codsaday in waajibaadka ina saaran aan iska ridno waxaana lagu furay shirka aayado kamid ah Qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay mid kamid ah culimada faraca. Waxaa lagu soo dhaweeyay mas’uul katirsan Golaha Dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) Naftihure Maxamuud Cabdulahi Sooc oo siwaafi ah uga warbixiyay xaalada guud ee halganku maanta marayo iyo qaar kamid ah marxaladihii uu halkanku soomaray.
Sidoo kale waxaa lagu soodhaweeyay gudoomiyaha guud ee gudiga qoxootiga Ogadenia Mudane Daahir Maxamad oo warbixin buuxda oo ku saabsan xaalada qoxootiga guud iyo qoxootiga ree ogadenia ba siiyay dadwaynihii madasha fadhiyay. Dhinaca kale waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha faraxa Ifo kadhisan ee muftaaxulxoriyo halgame Sh Xassan Raage oo salaan diiran oo uu waday kadib soo jeediyay khudbad qaali ah oo dhinacyo badan taabanaysay.
Intaas kadib waxaa cod baahiyaha qaatay xoghayaha OYSU Xagardheere halgame Cabdiraxmaan Faarax Barkhadle oo khudbad diiran oo dhiirigalin iyo baraarujin ah kadib bilaabay bixinta shahaadooyin ay qaateen 40 arday oo kamid ah ardaydii qaadatay koorsada Alifle. Qabashada siminaarkan ama koorsadan oo mudo dheer soosocday waxaa kaalin mug leh kaqaatay ururka OYSU Xagardheere oo caawimaad kahelayay maamulka faraca Iftin ee xarada kadhisan.